ब्याकलिङ्कहरू बढाउनको लागि उत्तम अवसरहरू के हो?
लिङ्क इमारत कुनै पनि अप्टिमाइजेसन अभियानको एक अभिन्न हिस्सा हो जुन बाह्य लिङ्कहरू एक वेबसाइटमा ट्राफिक र आय ल्याउन र खोज इन्जिनहरूको आँखामा यसको प्राधिकरण बढाउँछन्।. ब्याकलिङ्कहरूले अनलाइन व्यापारको लागि मतको रूपमा सेवा गर्छन्, र यदि तिनीहरू प्राधिकरण वेब स्रोतहरूबाट आउँछन् भने तिनीहरू स्वचालित रूपमा अधिक शक्तिशाली हुन्छन् र तपाईंको साइटलाई अधिक मूल्य दिन्छन्।. ब्याकलिङ्कले तपाईंको समग्र पेज प्राधिकरण र भरोसा बढाउन सक्छ ताकि तपाईं लक्षित खोज सर्तहरूको लागि SERP को शीर्षमा देख्न सक्नुहुनेछ.
तथापि, वास्तविक संसारमा, सबै ब्याकलिङ्कहरू समान रूपमा सिर्जना गरिँदैन. यसैले धेरै वेबसाइट मालिकहरू आश्चर्यजनक छन् कि कसरी उनीहरूको वेबसाइटहरूमा गुणवत्ता ब्याकलिङ्कको संख्या बढाउन सकिन्छ. ब्याकलिङ्कहरू जुन प्राधिकृत सम्मानित साइटहरूबाट आउँछन् र सहयोगी अनुसन्धान आधारित सामग्री द्वारा घिमिरे बढी तपाईंको व्यवसायसँगसँगै बढ्ने ट्राफिक ट्राफिकमा ल्याइने सम्भव छ। - sailun atrezzo zsr teszt. तपाईंको लिंक इमारत अभियान विकास गर्दा, तपाईं Google दण्ड र तपाईंको साइट रैंकिङ ड्रप रोक्नको लागि जोगिन आवश्यक तरिकाहरू को बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ.
Google वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू
तपाईंले आफ्नो साइटमा गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्ने अवसर खोज्नु अघि, तपाइँलाई Google वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू माथि जान आवश्यक छ जुन व्याख्या गर्दछ तपाईलाई कुन उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू छन् र कुन लिङ्क निर्माण अभ्यासहरू तपाइँलाई अनुकूलन अभियानमा समावेश गर्न आवश्यक छैन. Google ले स्प्यामी र कम गुणस्तर बाह्य लिङ्कबाट टाढाको सिफारिस गर्दछ. यी दिशानिर्देशहरू पछ्याउनेहरूलाई दण्डित गर्न Google ले प्रसिद्ध पेंगुइन अद्यावधिक स्थापना गरेको छ जसले धोखाधड़ी लिंक निर्माण गतिविधिहरूमा भाग लिईएका साइटहरूलाई डाउनग्रेड गरेको छ।.
निम्न स्पाइडी लिङ्क इमारत प्रविधि Google बाट स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दछ:
मौलिक सामग्रीको कमी वा धेरै सानो सामग्री;
लिङ्कहरू भित्र पाठ लुकेको छ, जस्तै फन्ट साइज0मा पाठ;
क्लोकिंग वा खोज इन्जिन र प्रयोगकर्ताहरू धोका दिने.
म दृढतापूर्वक तपाईंलाई यी धोखाधडी प्रथाहरूबाट टाढा रहन सिफारिस गर्छु र वेब स्रोतहरु संग सहयोग गर्दैनं जसले स्प्यामको रूपमा लिङ्क लिईएको लिङ्कबाट टाढा राख्न सक्दछ।.
कम-गुणस्तरको ब्याकलिङ्कहरू असक्षम गर्नुहोस्
तपाईंको ब्याकलिङ्क प्रोफाइलको गुणस्तर बढाउनको लागि, तपाईं Google Disavow उपकरणको शक्तिलाई कम गर्न सक्नुहुन्न।. गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू हटाउँदा तपाइँले स्प्यामी तेस्रो-पक्ष वेबसाइटहरूसँग सम्बन्धित हुनदेखि बच्न अनुमति दिन्छ. खराब गुणस्तर ब्याकलिङ्क जुन तपाईको साइटमा बिभिन्न बिभिन्न परिस्थितिहरूमा देखा पर्न सक्छ. कहिलेकाँही स्पैमी ब्याकलिङ्कहरू तपाईंको साइटको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा उत्पन्न हुन सक्छ. यसबाहेक, यो पनि तब हुन्छ जब वेबसाइट पुनर्गठनको कारण पुरानो ब्याकलिङ्कहरू उपलब्ध छैनन्. गुगलले कसरी ब्याकलिङ्कहरू हटाउन बताउँछ, त्यसैले उनीहरूले तपाइँको दर्जालाई असर गर्दैनन्. तपाईंले चाँडै पहिचान गर्नुभएको कुन लिंकहरू विच्छेद हुनु पर्दछ, तपाईंले प्राप्त सूचीको साथ फाइल सिर्जना गर्न र Google वेबमास्टर उपकरणमा अपलोड गर्न आवश्यक छ।.
अब, तपाईं जान्दछन् कि तपाइँबाट जगेडा राख्नु आवश्यक छ र तपाईलाई गुगलको मद्दतले कसरी गर्ने गर्दछ, त्यसैले तपाइँ आफ्नो साइट रेटिङ सुधार गर्न र बाह्य साइटहरूमा अधिक गुणस्तरको ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्न सही प्रविधिहरू सिक्न सक्नुहुन्छ।.
गुणस्तर ब्याकलिङ्कको संख्या कसरी वृद्धि गर्ने?
साइट सामग्रीमा अनुसन्धान सम्बन्ध
सामग्रीका लागि नयाँ विचारहरू विकास गर्न रोक्न किनकि त्यहाँ सँधै राम्रो अवसरहरू छन् जसले तपाईंलाई सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। धेरै नयाँ गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू. तपाईंले आफ्नो साइटमा सामग्री अंतरालहरू पत्ता लगाउन आवश्यक छ र सँधै नयां बारे अवगत हुनुहोस्. साइट सामाग्री मा अंतराल को अनुसन्धान को लागि केहि विकल्प हो जुन संपूर्ण साइट लेखा परीक्षा को व्यापक रूप देखि हुन सक्छ जहां तपाईं खोज इन्जिन अनुकूलन उपकरण को उपयोग गर्न को लागी तपाईंको सबै यूआरएल सूचीबद्ध गर्न को लागी या तपाईं को बारे मा उल्लेख गर्नुभएको छैन को पालन गर्न सामाग्री कोटिहरु को हेरविचार गर्न को लागी.
नयाँ सामग्रीका अवसरहरू पत्ता लगाउन, तपाईं विभिन्न व्यावसायिक खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. म मोज प्रो र सेल्टल्ट ओटो एसईओ को उपयोग को सिफारिश गर्छन . यी उपकरणहरू प्रयोग गर्दै, तपाईंले विशेष पृष्ठहरूका लागि श्रेणी निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ जुन यी सर्त सर्तहरूको लागि कीवर्डहरू र मासिक खोजी भोल्युम लक्ष्यीकरण गरेको छ.
तपाईंले हालैका कीवर्डहरू मेट्रिक्स पत्ता लगाउनु भएको बेला, तपाइँ सम्बन्धित खोजशब्दहरूको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ. नयाँ सान्दर्भिक कुञ्जीपाटीले तपाईंलाई तपाईंको साइटको लागि ताजा सामग्री सिर्जना गर्ने मौका दिनेछ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले चयन गर्नुभएको कीवर्डहरू तपाईको मार्केट आलासँग अधिकतम रूपमा प्रासंगिक छन् र उच्च खोजी मात्रा (कम से कम 1,000 प्रति महिना). तथापि, यी सर्त सर्तहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्दैन किनभने तपाईं उनीहरूको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न.
धेरै प्राधिकरण वेबसाइटहरू हेर्नुहोस्
तपाईंको ब्याकलिङ्क शक्ति बढाउनको लागि, तपाईलाई आफ्नो स्थानमा अत्यधिक-आधिकारिक वेबसाइटहरू हेर्न आवश्यक छ।. यो साइटहरू तपाईंको अनलाइन व्यापारमा सिधा प्रतियोगी हुनुपर्दैन, तर कम से कम आंशिक रूपमा तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित. यस्तो ब्याकलिङ्कले तपाईंलाई संभावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न, पेजरङ्क बढाउन र ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ. तपाईले वेबसाइटको लोकप्रियता, रेटिङ, आगन्तुकहरूको औसत संख्या र अन्य मेट्रिक्सहरू सेल्टल्ट वेबसाइट विश्लेषक प्रयोग गरेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।. तपाईँले प्रमुख मेट्रिकहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भनेर देखाउँछ कि वेबसाईटहरू पछिल्ला लिङ्कहरू र पेज रेटिङ बढाउनका लागि उपयोगी हुनेछ वा होइन.
तपाईलाई यस्तो वेबसाइट फिचरहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ जुन:
विभिन्न क्षेत्रहरूबाट वेबसाइटमा आउँदछ।
आधारभूत मेट्रिक्स सगाई - उछाल दर, एक समय प्रयोगकर्ता साइटमा, दैनिक पृष्ठदृश्यहरू, र अन्य);
कार्बनिक सर्च ट्राफिक र रेफरल यातायातको प्रतिशत;
शीर्ष खोजशब्दों देखि खोजशब्दहरु.
यी मेट्रिक्सले तपाईंको खोजीलाई कम पार्नेछ, तपाईलाई सबैभन्दा उपयुक्त सान्दर्भिक वेबसाइटहरूको सूची प्रदान गर्नेछ जुन तपाईँको साइटको लागि ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्न र राख्ने सबै भन्दा प्रभाव पर्दछ।.
सामग्री विचारहरू लिनुहोस्
अब, जब तपाईंले सबैभन्दा उपयुक्त प्राधिकरण वेब स्रोतहरू लिनुभएको छ, यो कमानेको समय हो। उत्तेजना र अनुसन्धान आधारित सामग्री उपलब्ध गराएर तिनीहरूलाई फिर्ता लिङ्कहरू. तपाईंको सामग्री अन्य प्रसिद्ध ज्ञात गुणस्तर वेबसाइटहरूमा देखा पर्ने प्राथमिक लक्ष्य तपाईंको ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न र नयाँ लक्षित दर्शकहरूलाई यो प्रदर्शन गर्न हो.
यदि तपाइँले तपाइँको सामग्रीलाई अन्य साझेदार साइटहरूमा लिङ्क निर्माण प्रयोजनको लागि पठाउन निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो अतिथि पोस्टिंग दिशानिर्देशहरूसँग मेल खान्छ र तपाईंको दर्शकको आवश्यकता फिट हुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्।. तपाईं अन्य वेबसाइट सामग्री विचारहरू पिच गर्न सक्नुहुन्छ वा केही अतिथि पोष्टहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यसो भए, यदि तपाइँ आफ्नो अनुसन्धानको लागि प्रासंगिक एंकर लिंकसँग गुणस्तर आधारित आधारित सामग्री प्रकाशित गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाईको साइटमा ट्राफिक वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरू बीचका विचारक नेताको रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्नुहुनेछ, जसले तपाईंको भुक्तानी सुरू.